accessiBe: Yenza Noma Iyiphi Isayithi Eqinisekisiwe Ifinyeleleke Ngokusebenzisa Ubuhlakani Obungenzele | Martech Zone
accessiBe: Yenza Noma Iyiphi Isayithi Eqinisekisiwe Ifinyeleleke Ngokusebenzisa Ubuhlakani Obungenzele
ULwesibili, May 31, 2022 ULwesibili, May 31, 2022 Douglas Karr
Yize imithethonqubo yokufinyeleleka kwesiza isineminyaka ikhona, izinkampani beziphuza ukuphendula. Angikholwa ukuthi yindaba yozwelo noma uzwelo ngasohlangothini lwezinkampani… Ngiyakholwa ngokweqiniso ukuthi izinkampani zimane zidonsa kanzima ukuhambisana nazo.
Isibonelo, Martech Zone isezingeni eliphansi ngokufinyeleleka kwayo. Ngokuhamba kwesikhathi, bengisebenzela ukuthuthukisa kokubili ukubhala ngekhodi, ukuklama, kanye nemethadatha edingekayo... kodwa angikwazi ukuqhubeka nokugcina okuqukethwe kwami ​​kusesikhathini futhi ngishicilela njalo. Anginayo imali engenayo noma abasebenzi abangahlala ngiphezu kwakho konke engidinga ukukwenza… Ngenza konke engingakwenza.
Angikholwa ukuthi yimi engihlukile lapha… empeleni, izinombolo ziyamangaza uma uhlaziya iwebhu kanye nokwamukela kwayo amazinga okufinyeleleka:
Ukuhlaziywa kwamakhasi asekhaya ayisigidi aphezulu kuwebhu kulinganisela ukuthi amaphesenti ayi-1 kuphela ahlangabezana namazinga okusetshenziswa asetshenziswa kakhulu.
Kuyini Ukufinyeleleka? Ayini Amazinga?
Imihlahlandlela Yokutholakala Kwewebhu (WCAG) chaza ukuthi ungenza kanjani okuqukethwe kwedijithali kufinyeleleke kalula kubantu abakhubazekile. Ukutholakala kufaka ukukhubazeka okuhlukahlukene:
Visual Ukukhubazeka - kufaka phakathi ubumpumputhe obugcwele noma obuncane, ubumpumputhe bombala, kanye nekhono lokubukeka ngokubandlulula izinto eziphikisanayo.
Ukukhubazeka kokuhlolwa - kufaka phakathi ukungezwa okugcwele noma okuyingxenye.
Ukukhubazeka ngokomzimba - kufaka phakathi amandla wokuxhumana nedijithali ngokusebenzisa i-Hardware ngaphandle kwamadivayisi we-interface yomsebenzisi njengekhibhodi noma igundane.
Ukukhubazeka kwenkulumo - kufaka phakathi amandla okuxhumana nedijithali ngenkulumo. Abantu abakhubazekile bangaba nezithiyo zokukhuluma ezibekela inselelo izinhlelo zanamuhla noma bangahle bangakwazi ukukhuluma nhlobo futhi badinge olunye uhlobo lomsebenzisi.
Ukukhubazeka kwengqondo - izimo noma ukukhubazeka okuvimbela inqubo yomuntu yengqondo, kufaka phakathi inkumbulo, ukunakwa, noma ukuqonda.
Ukukhubazeka kolimi - kufaka hlangana iinselele zombili zolimi nelokubhala.
Ukukhubazeka kokufunda - kufaka phakathi ikhono lokuzulazula ngempumelelo nokugcina imininingwane.
Ukukhubazeka kwezinzwa - kufaka phakathi amandla wokuxhumana newebhusayithi ngaphandle kokuthinteka kabi okuqukethwe. Izibonelo kungaba yizibonisi ezidala ukuquleka.
Yiziphi izingxenye ze-Digital Media Incorporate Accessibility?
Ukufinyeleleka akuyona into eyodwa, kuyinhlanganisela yokwakhiwa kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi kanye nolwazi olwethulwayo:
Izinhlelo Zokulawulwa Kokuqukethwe - amapulatifomu asetshenziselwe ukuthuthukisa okuhlangenwe nakho komsebenzisi. Lezi zingxenyekazi zidinga izinketho zokungeneka.
Okuqukethwe - imininingwane esekhasini lewebhu noma kuhlelo lokusebenza lewebhu, kufaka phakathi umbhalo, izithombe, nemisindo kanye nekhodi noma umaki ochaza ukwakheka nokwethulwa.
Ama-User-Agents - isikhombimsebenzisi esisetshenziselwa ukuxhumana nokuqukethwe. Lokhu kufaka phakathi iziphequluli, izinhlelo zokusebenza, nabadlali bemidiya.
Ubuchwepheshe obusizayo - izitshudeni zesikrini, amanye amakhibhodi, amaswishi, kanye nesoftware yokuskena abantu abakhubazekile abayisebenzisela ukuxhumana nomenzeli womsebenzisi.
Amathuluzi wokuhlola - amathuluzi wokuhlola ukufinyeleleka kwewebhu, iziqinisekiso ze-HTML, iziqinisekiso ze-CSS, ezinikeza impendulo enkampanini yokuthi ungakuthuthukisa kanjani ukufinyeleleka kwesayithi nokuthi liyini izinga lakho lokuhambisana.
I-AccessiBe: Ukufaka i-AI yokufinyeleleka
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela (AI) kukhombisa ukusizakala ngokwengeziwe ngezindlela ebesingazilindelanga… futhi ukufinyeleleka manje sekungenye yazo. accessiBe ihlanganisa izinhlelo ezimbili ezihlangene ukufeza ukuhambisana okugcwele:
An isikhombimsebenzisi sokungeneka lazo zonke i-UI nokulungiswa okuhlobene nokuklanywa.
An I-AI inikwe amandla ingemuva ukucubungula nokusingatha izidingo eziyinkimbinkimbi - ukwenzelwa abafundi besikrini nokuzulazula kwekhibhodi.
Nayi ividiyo yokubuka konke:
ngaphandle accessiBe, inqubo yokulungiswa kokufinyeleleka kwewebhu yenziwa ngesandla. Lokhu kuthatha amasonto futhi kubiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi. Kepha okuphathelene kakhulu nokulungiswa okwenziwa ngesandla ukuthi uma sekuqediwe, konakala kancane kancane ngenxa yesiphequluli, i-CMS, futhi-ke, nokuvuselelwa kwewebhusayithi. Zingakapheli izinyanga, kudingeka iphrojekthi entsha.
With accessiBe, inqubo ilula kakhulu:
I-interface yokufinyeleleka ivela ngokushesha kuwebhusayithi yakho.
accessiBeI-AI iqala ukuskena nokuhlaziya iwebhusayithi yakho.
Kufike emahoreni angama-48, iwebhusayithi yakho iyatholakala futhi iyahambisana ne-WCAG 2.1, i-ADA Isihloko III, iSigaba 508, ne-EAA / EN 301549.
Njalo emahoreni angama-24, i-AI iskena okuqukethwe okusha nokubuyekeziwe ukuze kulungiswe.
Ukukhipha izinkulungwane zamaRandi amahlandla amaningi ngonyaka akuyona into amabhizinisi amaningi angakwazi ukuyikhokhela. Ngokwenza ukufinyeleleka kwewebhu kungabi namandla, kungabizi, futhi kugcinwe ngokuqhubekayo - accessiBe eshintsha umdlalo.
accessiBe futhi inikeza a Iphakheji Yokuxhaswa Kwamacala ngaphandle kwezindleko ezingeziwe, esimweni lapho ukuthotshelwa kwewebhusayithi yakho kuphonselwa inselelo. Kanye nokunakwa kwabo, iphakethe lifaka ukucwaningwa kobuchwepheshe, imibiko, imephu yokufinyeleleka, ukuhambisana kwemibhalo, ukuholwa, nokuningi.
Funda kabanzi Bhalisela Imahhala
Ukudalula: Inkampani yami Highbridge kuyinto I-AccessiBe uzakwethu futhi sisebenzisa isixhumanisi sami sokulandela umkhondo wozakwethu kulesi sihloko. Uma udinga usizo ngokulungiselela nokusebenzisa i-AccessiBe, singakwazi ukukusiza.
Tags: i-acessibeIsihloko se-ADA IIIaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaukufinyeleleka kokuzwaukukhubazeka kwezindlebeukufinyeleleka kwengqondoukukhubazeka kwengqondoukufinyeleleka kolimiukukhubazeka kolimiukufinyeleleka kwemizwaukukhubazeka kwezinzwaukufinyeleleka ngokomzimbaukukhubazeka ngokomzimbaIsigaba 508ukufinyeleleka kwenkulumoukukhubazeka ekukhulumeniukufinyeleleka okubonakalayoukukhubazeka okubukwayowcagI-WCAG 2.1ukufinyeleleka kwewebhuimihlahlandlela yokufinyeleleka kokuqukethwe kwewebhu
I-Luminar Neo: Ukuhlelwa Kwesithombe Okusha Ngokusebenzisa Ubuhlakani Bokwenziwa (AI)
Ingabe Wenza I-Instagram Marketing Okungalungile? Gxila Kubuqiniso!